कुत्तों मा सिस्टाइटिस, समय मा उपचार गरिन सक्छ
अन्य स्तनपालिकाहरू जस्तै कुत्तहरू, जीनैरेनेसरी प्रणालीको धेरै रोगहरूको प्रवद्र्धन हुन्छ। यदि कुत्तों मा पिस्टिटिस को समय मा निदान गरिन्छ भने उपचार ले यस बीमारी को बिना गंभीर परिणामहरु लाई मुक्त गर्न सक्छ। तपाईंको जानवरमा यो रोगको लक्षणहरू प्रकट गर्दा यो घमण्ड गर्न आवश्यक छैन, तपाईं एक निदान गर्न र डाक्टरको नुस्खाको साथ अगाडि बढ्नु पर्छ। यस घटनामा सिस्टाइटिसको उपचारले चाँडै देखा पर्दछ जुन तपाईले एक अनुभवी पशु चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्दछ जसले सही निदान राख्दछ र उपयुक्त उपचारको वर्णन गर्नेछ।
सबैभन्दा सामान्य रोग महिलाहरूमा हुन्छ। सिस्टाइटिस हाइपोथ्मिया को घटना को बढावा गर्छन, साथै साथ शरीर को कमजोर। यदि रोगको तीव्र रूप, जुन उपचार गरिएको छैन, समयमा पत्ता लागेन, यो पुरानो चरणमा जान सक्छ, जुन जनावरको लागि खतरनाक छ।
यस रोगको उपचार, सिस्टाइटिस - संकेतहरू
कुत्तों मा सिस्टाइटिस, जसको उपचार एक परिसर मा जान पर्छ, अक्सर एक जटिलता को रूप मा उत्पन्न हुन्छ, pyelonephritis या urolithiasis को रूप मा, र dioctophims र capillaries द्वारा मूत्र अंग को घाव पछि, परजीवी हो पछि यो सम्भव छ। यदि सिस्टिटेसन हुन्छ भने, अनुपयुक्त उपचार पनि अल्सरको गठन हुन सक्छ, र मूत्राशयका पर्खालहरु को गर्दन सम्भव छ, तर सामान्यतया यो यस्तो नतिजाहरु नगर्ने हुन्छ।
रोगको गम्भीरतामा आधारित, विभिन्न लक्षणहरू छन्। यदि कुत्तों मा एक पिस्टिसिस थियो, उपचार को रोग को पाठ्यक्रम को गंभीरता को अनुसार निर्धारित गरिनु पर्छ। मुख्य लक्षणहरू बारम्बार पेशात्मक हुन्छन्, साथसाथै बुखार। कहिलेकाहीँ यो रोग उल्टी र अन्वेषण समेत हुन सक्छ। तपाईंको पाल्तुको पेट पल्टिँदैछ, तपाईले एकदम बढि ब्लेडर महसुस गर्नुहुनेछ । सही निदान प्राप्त गर्न यो मूत्रको प्रयोगशाला परीक्षण सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
यदि तपाईंको कुकुर तीव्र सिस्टाइटिससँग बिरामी हुन्छ भने , समय-समयमा मेडिकल क्यान्सरको साथ, यो बिरामी चाँडै नै हुनेछ र लगभग तपाईंको पादरीको लागि गायब हुन्छ। पुरानो चरणको उपस्थितिमा लामो र अधिक सावधान उपचार आवश्यक छ। यदि कुत्तों मा भ्रूणकारी पिस्टिटेसन थियो भने, सिस्टलोलोनप्लोस्सीको प्रयोग गरेर कुनै पनि अन्य अवस्थामा उपचार गर्न सकिन्छ, मर्छ।
यस रोगको प्रतिरोध गर्न मुख्य तरिका एक प्रचुर मात्रामा पेय (ह्यास्सेलको कणोधन गर्ने वांछनीय छ) र मूत्राशय क्षेत्रको न्यानो तापक्रम लाग्ने। दबाइहरु बाट, 10 दिन को लागी एंटीबायोटिक्स र बर्मिगिना को प्रशासन निर्धारित गरिएको छ।
यदि जनावर पुरानो सिस्टाइटिसको साथमा बिरामी हुन्छ भने, UHF-diathermy, जुन ब्लडर क्षेत्रमा लागू गरिन्छ, थप रूपमा तोकिएको हुन सक्छ। परजीवीहरूको कारणले गर्दा रोग piperazine संग व्यवहार गरिन्छ, जुन3हप्ताको लागि लिइएको छ। यदि पिस्टिअस जानवरमा युनिथिथियासिसको उपस्थितिको परिणाम हो भने, प्रायजसो सर्जिकल हस्तक्षेपमा सहज हुन्छ।
अक्सर, जो गाँउहरु वा सानो शहरमा बस्ने मान्छे को लागि सहयोग को लागि एक उच्च योग्य पशु चिकित्सक को उपयोग छैन, यसैले त्यस्ता मामलाहरु मा यो यस रोग को उपचार को लोक प्रथा सिद्ध गर्न को लायक छ।
प्रायः प्रयोग गरिने प्राकृतिक एन्टिबायोटिक्सहरू: रोबर्ब, लाइसेन्स नग्न, बियरबेरी। यी जडी बूटीबाट, एक कण तयार छ, जो लगातार बीउ कुत्ते को आहार मा एक पेय को रूप मा जोडिएको छ। जडीबुटीको जडी बूटियों संग सुत्न, बिहान र साँझमा आयोजित, धेरै सहयोगी छ। सिस्टाइटिसको उपचार चाँडै असंभव छ, तपाईंलाई धैर्य देखाउन आवश्यक छ।
विभिन्न डायरेटिक औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ जुन पशुको जीनोटीरियल प्रणालीबाट पारजनिक जीव हटाउने मद्दत गर्दछ। यस कार्यको साथ, अजमोदको कष्ट उत्कृष्ट छ।
यो उपचार3महिना भन्दा बढीको लागि लाग्न सक्छ, त्यसपछि तपाईलाई एक महिनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यदि आवश्यक छ भने, तपाइँ यी गतिविधिहरू दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ।
किन रेड-कान कछुए स्क्वाइङ गर्दै छन्: जनावरहरूको कारणहरू र उचित हेरविचार
Roulettes "Flexy": सामानको वर्णन र यसको बारे समीक्षा
बिरालोबाट फ्याट हटाउने? राम्रो सल्लाह
एक वास्तविक स्कूल डेस्क: छनौटको साइज र नियम
कसरी सही हुनेछ: प्राध्यापकहरू वा प्राध्यापकहरू?
ग्राफिक्स सम्पादक। विशेष गरी काम
राज्य Philharmonic। युमेन र सांगीतिक कला
स्वास्थ्य बीमा: नीति के हो?
"वोदका खबरदार" (सलाद): धेरै व्यञ्जनहरु
प्ले "आंधी" मा Kabanihi छवि। विशेषताहरु र प्ले मा Kabanihi छवि "आंधी" Ostrovsky
Bitch। यो कसले हो?
ढाँचा पछि डाटा रिकभरी लागि सफ्टवेयर